Faahfaahin: Dhimista Cashuurta Dahsoon - Radio Sweden Somali - Raadiyaha Iswiidhen | Sveriges Radio
Faahfaahin: Dhimista Cashuurta Dahsoon
La daabacay tisdag 20 september 2011 kl 14.01
Miisaaniyadda dawladda ee xilligan la soo ban-dhigay ayuu garabka ugu ballaaran yahay dhimista cashuurta dadban ee maqaayadaha si loo dhimo heerka shaqa-la'aan, waana maal-gelin ay ku kici doonto dhaqaale gaarsiisan 5,4 milyaard ee koronka iswiidhishka.
Waxaanse illaa hadda caddayn tirada goobo shaqo ee miisaamiyaddaasi hor-seedi doonto. Waxaa sidoo kale middaa ka gaabsaday ururka shirkadleyda hoteellada iyo maqaayadaha ee dalka, islamarkaana muddaba u ololeeynayay fikirka la xiriira dhimista cashuurta dahsoon.
Agaasimaha ururka Eva Östling Ollén ayaa ka gaabsatay inay wax tiro ah magacawdo, iyadoona hadda ka hor mar la weydiiyay uu ururku sheegay 15 000 oo goobood, kadib hoos loo dhigay mar labaad oo la gaarsiiyay 10 000 oo goobo shaqo.
Ururka ayaa tusaale wanaagsan u soo qaata dalka Faransiiska waddammada guusha ka gaaray, dalkaasina oo kadib hir-gelintii dhimista cashuurta dahsoon ey shaqaalihii maqaayaduhu kor u kaceen 3,2% muddadii u dhaxeeysay sannadihii 2009 - 2010. Isla muddadaa ayey shaqaalaha maqaayadaha ee dalkan Iswiidhen kor u kaceen 4,3% iyadoo aan la dhimin cashuurta dahsoon.
Sidee haddaba lagu xaqiijin karaa in kor u kaca shaqaalaha maqaayadaha ee dalka Faransiiska uu ku xiran yahay dhimista cashuurta dahsoon.
Dhammaadkii sannadkii tagay ayey si wada jir ah u sheegeen Anders Borg, wasiirka dhaqaalaha iyo Maud Olofsson, wasiirka manaafacaadku in dhimista cashuurta dadban hor-seedi doonto abuuritaanka 8 000 goobo shaqo oo hor leh mustaqbalka. Halka uu baarihii dawladdu sheegay bishii maarso iney tiradaasi gaarsiisan tahay 3,500 iyadoona miisaaniyadda loogu tala-galay marka la eego shaqadiiba ay dawladdu ku bixin doonto 600 000 oo koron.